Jumlada CK6140 A 4 xarunta mashiinka korantada cnc lathe oo leh soo saaraha birta iyo alaab-qeybiye | Lu Young
CK6140 A 4 saldhig mashiinka korantada cnc lathe bir ah
Mashiinka ayaa xaqiijin kara xakamaynta otomaatiga ah, wuxuu si otomaatig ah u socodsiin karaa qaybo kala duwan oo ka mid ah wareegga gudaha iyo dibedda, wejiga dhammaadka, jeexjeexa, koorta aan loo aabo yeelin, wareegga, iyo dhammaan noocyada silsiladda mitirka dhejiska ah, dunta xargaha, iwm. , waxay soo diri kartaa oo ay heli kartaa calaamado kala duwan, waxay xakameyn kartaa habka waxqabadka tooska ah
Ugu badnaan lulaya dia. sariirta dusheeda
Ugu badnaan lulaya dia. isweydaarsiga iskutallaabta
750mm / 1000mm
Qaybta bar qalabka
20X20mm / 25X25mm
X / Z tiirarka dhidibka
5 / 7.5NM
X / Z xawaaraha quudinta dhakhsaha badan
2120/2370 * 1400 * 1700mm
1800 / 1950kg
Qalabka mashiinku wuxuu leeyahay saxnaan sare, wiishka ugu weyn waxaa taageera Harbin HRB labalaab kubbadeed oo sax ah oo sareeya, oo leh sawaxan hoose, saxnaan sare iyo xasilooni wanaagsan.
Tareenka hagaha sariirta ayaa dhalaalaya kadib maqalka codka sare, oo leh adkaansho sare iyo qalafsanaan wanaagsan.
Nasashada aaladda afar-korontada waxay qaadataa saxnaanta saxanka ilkaha, saxsanaanta sare ee meelaynta soo noqnoqda.
Jirka dabada oo leh qalab isku xira CAM si dhakhso leh, wax ku oolnimada shaqada. Waxaa jira qalab ka hortagaya wareegga yara ee godka dabada, kaas oo ka fogaan kara inuu waxyeeleeyo taabashada daloolka godka godka dabada ee uu sababay wareegga yara qaladka awgeed, iyo inuu si wax ku ool ah u ilaaliyo qeybaha dabada
Nidaamka: GSK928TD-L, X / Z gawaarida gawaarida dhidibka.
Buugga 3-daan chuck.
4-boosteejo qalab koronto ah.
Dabada dabada gacanta
Nidaamka saliidaynta otomaatiga ah.
Nidaamka CNC: Siemens, Fanuc, KND.
Chuck Haydarooliga / Pneumatic chuck.
Cudurka dabaysha / Kaydka hawada.
Horizontal 6-saldhig turret / 8-saldhig turret.
Baaskiil baabur otomatig ah
Shirkadda makiinadaha ee Luyang CNC waxay leedahay khibrad 20 sano ah soosaarka lathe, lathe-ka ugu muhiimsan ee CNC, mashiinka wax lagu shiido ee CNC, xarunta makiinada, noocyada Switzerland noocyada kala duwan ee shirkadaha lathe CNC. Shirkaddu waxay leedahay cilmi-baaris wax soo saar xirfad leh iyo koox horumarineed iyo koox-farsamo taageero-iibsi kadib iibsi wax ku ool ah. Adoo siinaya macaamiisha qalab mashiinka CNC oo qiimo jaban leh iyo talo iibin waqtigeeda ku habboon iyo adeegga iibka kadib, shirkadeena waxay ku guuleysatay sumcad wanaagsan gudaha iyo dibedda. adag.
Shirkaddayadu waxay sii waddaa inay xoojiso hagaajinta wax soo saarka, hal-abuurnimada mashiinnada CNC ee wax-soo-saarka wax-ku-oolka ah, waxay hagaajineysaa nidaamka xakamaynta tayada wax soo saarka shirkadda, waxay siisaa adeegyo taageero caalami ah oo ah hoggaanka hoggaanka horumarka ee shirkadda.
Dhammaan alaabooyinka waa la heli karaa marka la codsado, leh ama aan lahayn summad ganacsi. Haddii aad u baahan tahay adeegga OEM oo leh astaantaada ama sheygaaga, fadlan nala soo socodsii. Haddii aad leedahay shuruudo kale oo gaar ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Warshadayadu waxay heshay liisanka soo dejinta iyo dhoofinta ee ay soo saartay wasaarada ganacsiga dibada, waxayna ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada iso9001 iyo shahaadada CE. Lakabka tayada ee lakabka, waxaan si kal iyo laab ah ugu adeegi doonaa inta badan macaamiisha.
1. Waa maxay waqtigaaga caadiga ah ee hogaanka?
Shirkadeena waqtiyada hogaaminta caadiga ahi waxay u dhexeeyaan 3-4weeks kadib markay helaan amarka.
2. Maxay yihiin shuruudaha bixinta ee aad bixiso?
Waxaan aqbalnaa bixinta T / T, L / C, iyo Western Union, lacag, O / A iwm.
3. Baakad noocee ah ayaad bixisaa?
Caadi ahaan kiiska plywood, si loo hubiyo in alaabada oo dhan ay xaalad wanaagsan ku jirto.
4. Waa maxay MOQ wax soo saarkaaga?
MOQ waxay kuxirantahay shuruudahaaga midab, astaan ​​iyo wixii lamid ah. Alaabada caadiga ah qaarkood, waxaan ku haynaa keyd, MOQ waa 1 go'an.
5. Ma haysaa shahaadada CE
Haa, waxaan haynaa shahaadada CE, tayada mashiinka waa hal sano oo damaanad ah.
6. Sidee loo xakameynayaa tayada wax soo saarka?
Waxaan marwalba xooga saarnay heerka tayada oo la ilaaliyo. Intaa waxaa dheer, mabda'a aan had iyo jeer ilaalino waa "siinta macaamiisha tayo wanaagsan, qiimo wanaagsan, iyo adeeg wanaagsan".
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida CK6140 Xarunta Birta leexleexda ee CNC t
Hore: BK5030 cnc vertical Sloting machine for biraha
Xiga: CK6163 shaqo culus oo jiif ah 4 qalabka saldhigga mashiinka lathe cnc
CK6130 jiifay jiifay flat CNC lathe ma ...